Southern African Group’s Head Urges Zimbabwe Sanctions Review - Bloomberg
Bloomberg Anywhere Remote LoginDownload SoftwareService Center MENU Homepage Markets Stocks Currencies Commodities Rates + Bonds Economics Magazine Benchmark Watchlist Economic Calendar Tech U.S. Global Startups Cybersecurity Digital Media Bloomberg Technology TV Hello World Studio 1.0 Pursuits Cars & Bikes Style & Grooming Spend Watches & Gadgets Food & Drinks Travel Real Estate Art & Design Politics Global Risk Briefing How We’ll Know if Trump Is Making America Great Again Tracking Trump’s Web of Conflicts The Inauguration of Donald J. Trump On the March in Trump’s Capital Opinion View Gadfly Businessweek Subscribe Cover Stories Opening Remarks Etc Features 85th Anniversary Issue Behind The Cover More Science + Energy Graphics Billionaires Game Plan Small Business Personal Finance Live TV Inspire GO The David Rubenstein Show Sponsored Content Bloomberg About The Company Sign In Sign In Subscribe Southern African Group’s Head Urges Zimbabwe Sanctions Review
August 18, 2013, 12:21 PM EDT
Joyce Banda, chairwoman of the Southern African Development Community, called on western nations to review sanctions against Zimbabwe after the country’s presidential election last month.
“I want the West to review its position on the sanctions in Zimbabwe,” Banda, who also is Malawi’s president, said in remarks at the closing of an SADC summit meeting held in her country’s capital, Lilongwe. “Zimbabweans deserve better and Zimbabweans have suffered enough.”
Sanctions against Zimbabweans including President Robert Mugabe were imposed in 2003 by U.S. President George W. Bush, a Republican, and were continued under his Democratic successor, Barack Obama. Mugabe was re-elected for another five-year term. The SADC has 15 members including Angola and Mozambique.